Nkwalite nke Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi | Martech Zone
Na akwukwo ha na akwukwo ndi mmadu, Atlas na-enye ufodu ihe omuma banyere ire ahia mmadu. Mgbe ị na-etinyekwu oge na igwe mkpokọta, 25% nke ndị mmadụ na-eji 3 ma ọ bụ karịa ngwaọrụ kwa ụbọchị, na 40% nke ndị mmadụ gbanwere ngwaọrụ iji mezue ọrụ
Gini bu ahia ndi mmadu?
Applicationsfọdụ ngwa na nyiwe na-enye ndị mgbasa ozi ikike bulite atụmanya ma ọ bụ ndepụta ndị ahịa iji dakọtara ndị ọrụ n'etiti ha abụọ. Ndepụta nwere ike ibudata ma kwekọọ na ndị ọrụ n'ime sistemụ nne na nna dabere na adreesị ozi-e. Mgbe ahụ onye mgbasa ozi nwere ike ịchọta ndepụta ndị ahụ na mkpọsa akọwapụtara.
Achọtara m onwe m na ntutu ndị a. M na-eji ekwentị mkpanaaka m tụgharịa site na ozi ịntanetị na mmekọrịta mmadụ na ibe, mgbe ahụ mbadamba m iji zaghachi ọtụtụ, mgbe ahụ m ga-agbadata isi ọrụ na laptọọpụ m. Nke a, n'ezie, bụ nnukwu nsogbu nye ndị mgbasa ozi. N'iji usoro kuki kuki, o siri ezigbo ike ijikọta achicha ma chọpụta olile anya gị ma ọ bụ onye ahịa gafee ngwaọrụ ọ bụla ha na-eji.
Dabere na Nielson OCR Norms:
58% nke ihe kuki kuki bụ ihe karịrị akarị
141% ekwuputaghi ugboro ole na nhazi kuki
65% ziri ezi na omume igwe mmadụ ezubere iche n'ihe metụtara kuki
12% nke mgbanwe a na-efu site na ịtụle kuki
Ya kpatara ahia ndi mmadu na-arị elu. Kama ịzụ ahịa na kuki ihe nchọgharị na ịnwa ijikọ ntụpọ, ụlọ ọrụ nwere ike bulite atụmanya ha ma ọ bụ ndepụta ndị ahịa ozugbo na ikpo okwu mgbasa ozi wee lekwasị ndị ọrụ ahụ anya na ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụghị ihe nzuzu - ọtụtụ ndị na-eji adreesị ozi-e dị iche n'etiti usoro mmekọrịta ha na nyiwe azụmaahịa ha. Mana o nwere ọtụtụ uru dị ịtụnanya karịa usoro nhazi na nkewa.
Mgbama na Econsultancy nyochara 358 agadi North American ika ahịa na gị n'ụlọnga media azụ ahịa ịghọta mmetụta na ọdịnihu nke mgbasa ozi nwere ike ịchọta n'ime ụlọ ọrụ ha. Anyị chọpụtara na ndị mgbasa ozi dị njikere ịbawanye itinye ego ha na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ime ka ha jikọta mgbasa ozi ha na ndị ahịa n'ezie, na-enye ha ike ịchekwa mgbasa ozi dijitalụ na nkọwa na mkpa. N'ikpeazụ, mgbasa ozi ndị mmadụ na-adabere na ya bụ atụmatụ ha ga-eji merie nsogbu nke ụwa cross-device.
Nsonaazụ dị egwu! 70% nke ndị mgbasa ozi kọwara nsonaazụ nke mbụ ha na-ebute dị ka ihe dị mma ma ọ bụ na-atụ anya ya, 63% nke ndị mgbasa ozi na-ekwupụta mmụba nke ọma site na ọnụego, na 60% nke ndị mgbasa ozi nwere ọnụego mgbanwe ntụgharị dị elu Nke a bụ ozi nkọwa zuru ezu site na algbaàmà:
Tags: ihe omumaFacebookndị na-ege ntị na facebookndị dabere namgbasa ozi dabere na ndị mmadụahia ndi mmadumgbaàmàTwitter